Fanafody vita amin’ny akora natoraly Manomboka mahaliana ny olona
Kely kokoa ny voka-dratsy azo avy amin’ny fihinanana fanafody vita amin’ny akora voajanahary raha oharina amin’ireo fanafody vita amin’ny akora simika, hoy Atoa Rado Ratovo, tompon’andraikitra ara-barotra eo anivon’ny orinasa GRC.
Vetivety ihany koa ny olona dia mahita vokatra, antony mahatonga azy ho liana amin’izy ireny, eny fa dia ny resaka menaka fanorana aza. Efa hita eto amintsika, ohatra, ireo karazana gélule vita amin’ny tongolo gasy hahafahana miady amin’ny aretin’ny tosidra sy ny fo. Toraka izany koa ireo vita amin’ny spiruline ho an’ireo olona reraka na tsy ampy sakafo nefa koa tena mety ho an’ireo mpianatra hitazonana ny fitadidiana. Efa manomboka betsaka ireo mpanjifa izany ankehitriny, hoy hatrany ity tompon’andraikita ity hatramin’ny nisian’izy ireo efa 12 volana lasa izay.